Xiriirka Arrimaha Dibedda Soomaaliya - Wikipedia
Xiriirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa mid ku jira gacanta Madaxweynaha kaa soo ah hogaanka qaranka, Ra'iisul wasaaraha kaa soo ah Hogaanka xukuumadda, iyo wasiirka arimaha dibadda ee Dawladda federaalka Soomaaliya.
2 Wasaarada Arimaha Dibeda
Soomaaliya Kadib xornimadii 1960 waxay xiriir la lahayd dalal farabadan oo ay ka heli jirtay caawinaad waxaana ugu muhiim sanaa Talyaaniga, Midowga Sofiyet, dalalka ku bahoobay Jaamacada Carabta, Maraykanka, Jarmalka iyo Shiinaha.
Wasaarada Arimaha Dibeda
Wasaarada Arimaha Dibada Soomaaliya waa wasaarad ka tirsan Dawlada Soomaaliya taasi oo maamusha arimaha xidhiidhka dibada ee Soomaaliya. Wasaaradani waxay hoostegtaa Wasiirka Arimaha Dibeda Soomaaliya, xilkaasi hada waxaa haya Cabdisalaam Cumar.
Sida caadiga ah, Wasaarada Arimaha Dibedu waxay u qaabilsan tahay xidhiidhka arimaha dibeda, siyaasada dibeda, go'aanada dowladaha kale iyo metelida dowlada Dowlada Federaalka Soomaaliya. Sidoo kale, wakaaladani waxay uga qeybgashaa dowlada wadanka dhamaan shirarka Qaramada Midoobay, Ururada Siyaasi, iyo dhamaan xidhiidhka caalami.
Liiska ergeda dibloomaasiyiinta
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xiriirka_Arrimaha_Dibedda_Soomaaliya&oldid=162830"
Last edited on 17 Oktoobar 2016, at 04:39
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 17 Oktoobar 2016, marka ee eheed 04:39.